समाज Archives - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
पछिल्लो २४ घण्टामा ६७२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ७,१६७ पीसीआर परीक्षणमा ५८२ र २,३२८ एन्टिजेन परीक्षणमा ९० जना गरी ६७२ जनामा
रमेशरमण खनाल : हुन त मेरो देशका नेताहरुलाई स्थानीय स्तरको साना मान्छेहरुले बोलेको सुन्ने फुर्सद पनि छैन । सुनेपनि त्यो हावामा उडाईन्छ, हावादारी गफ भनेर ठोकिन्छ । मानौँ यो देशका
अमेरिकामा कोरोना भाइरसविरुद्धको फाइजर–बायोएनटेक खोप पाँचदेखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई दिन स्वीकृत गर्ने तयारी भएको छ । अमेरिकी सरकारको प्यानलले फाइजर खोप पाँच वर्ष वा त्यो भन्दा माथिल्लो उमेरका बालबालिकाका लागि
मङ्सिर १ गतेदेखि बिजुलीको नयाँ महसुल दर लागु हुने भएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले नयाँ दर स्वीकृत गरिसकेको र बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ
तनहुँका १० पालिकामध्ये दुई पालिका कोरोनामुक्त बनेका छन्। जिल्लाको आँँबुखैरेनी गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिकामा कोरोनाको संख्या शून्य दर रहेको छ । तनहुँमा हाल २८ जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य कार्यालय
शिक्षक सेवा आयोगले १७ हजारभन्दा बढी शिक्षकको नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने भएको छ । देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमा रिक्त रहेका शिक्षकको दरबन्दी प्राप्त भएपछि आयोगले पदपूर्तिको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि
बुधबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार गत मंगलबारको तुलनामा आज सुन तोलामा अधिकतम ६०० रुपैयाँले र चाँदी १५ रुपैयाँले घट्न पुगेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा बिहान ८ बजेदेखि सेवाग्राही लाईन लाग्ने गरेका छन् । बिहान १० बजे कार्यालय खुल्ने समयसम्म सेवाग्राहीको लाइनले आँगन भरिसकेको हुन्छ । केहीदिन यता प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता,